DHAGEYSO: Sheekh Shibli oo wax laga waydiiyay waxa ay Shareecada ka qabto in laga xaalo Kufsiga – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Iyadoo muddooyinkii u dambeeyay gudaha Soomaaliya uu aad u soo kordhay tacadiyada ay ka midka yihiin kufsi wadeeradka iyo dilalka loo gaysanaayo dumarka Soomaaliyeed ayaa waxaa si kulul uga ka hadlay Culimaa’udiinka Soomaaliyeed.
Dhacadii u dambeeysay ayaa waxa ay ahayd, Jimcihii la soo dhaafay, kaddib markii Gabar Ardayad aheyd kufsi wadareeg iyo dil loogu geystay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid ah Culima’udiinka Soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay kufsiga iyo dilka haweenka Soomaaliyeed loo geysanayo.
Mar uu la hadlayay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da, Sheekh Shibli ayaa sharraxaad ka bixiyay waxa ay shareecada Islaamka ka qabto, marka haweenka fal kufsi ah loo geysto kaddibna la dilo.
Tags: Maxay Shareecada Islaamka ka qabtaa Kufsiga iyo Dilka